सामाजिक नेटवर्किंग शिष्टाचार - एक SNOB नहुनुहोस् | Martech Zone
सामाजिक नेटवर्किंग शिष्टाचार - एक SNOB नहुनुहोस्
यो रेन्ट केहि समयको लागि तयार गरिएको छ तर म अगाडि जान्छु र भन्छु, इन्टरनेटको एक विश्वव्यापी रकम ** होलको बाँकी विश्वको रूपमा छ। हाह ... फाई, मैले भने। म राम्रो महसुस गर्छु।
यहाँ मेरो गाई छ। वेबबाट हिट गर्नको लागि सोशल नेटवर्कि the उत्तम चीज हो… hmmmm… बाट। ठीक छ, हामी मात्र यो वेबमा हिट गर्ने सब भन्दा राम्रो चीज हो भन्न गरौं। म मेरो असहमति, विचार, र आपत्तिहरु को आवाज को लागी सक्षम गर्न को लागी प्रेम गर्दछु। मलाई अरू व्यक्तिको विचार र सल्लाहहरू पनि सुन्न मन पर्छ - जब म भावुक रूपमा असहमत भए पनि।
कहिलेकाँही यो अविश्वसनीय विश्वव्यापी वेबले महसूस गर्दछ कि यो उत्तम छ, सानो समुदाय। मसँग पाठकहरू छन् जुन निरन्तर मेरो ब्लगको भ्रमण गर्दछन्, र त्यहाँ ब्लगर्सको समूहहरू छन् जुन म पछिल्लो दुई-दुई वर्षहरूमा धेरै मन पराउँछु।
त्योले भन्यो, किन कसैले यो समुदायमा भाग लिन्छ भन्नुको मतलब हो? यो तिनीहरूको जीवनको बारे के हो जुन यति दुखी छ कि तिनीहरू वास्तवमै अनलाइन हुनुपर्दछ र अरूलाई उनीहरूको दयनीयता फैलाउने प्रयासमा जानुपर्दछ? तपाईंको जीवन कत्तिको दु: खी छ?
भर्खरका घटनाहरूको एक जोडी मलाई भयो। भर्खरको कुरा के हो भने मेरो कोडमा केही मेरो साइटमा देखियो र उठेको थियो Reddit.com 'gizmo' नामको कोमलद्वारा। मलाई गिज्मो थाहा छैन, तर म उहाँलाई समय लिने र लिंक पोष्ट गर्ने सराहना गर्दछु।
टिप्पणीहरू जाँच गर्नुहोस्! SNOBS! अझ राम्रो थियो जब मेरो एक साइटमा थियो Ajaxian। ती टिप्पणीहरूमा हेर्नुहोस्! केवल सादा चोट पुर्‍याउने। मैले तल झर्न भनेँ। मसँग एक कूल उपकरण थियो, मैले केही शान्त प्रविधि प्रयोग गरे, र मैले यसलाई त्यहाँका मानिसहरूका लागि राखे। यो नि: शुल्क पनि छ! कोही पनि यसमा जानु हुँदैन, र यदि ती गरे, तिनीहरूले यसको लागि तिर्नु पर्दैन।
तलको रेखा यो हो कि त्यहाँ SNOB हुन कुनै कारण छैन। सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझावहरू, चासो, सूचक, रचनात्मक आलोचना प्रदान गर्दै ... यी सबै विधिहरू 'सामाजिक' स्वीकार्य छन्। ती सबै चीजहरू हुन् जसले हामीलाई विकसित गर्न र हामी के गर्छौं र के हामी जान्दछौं अझ राम्रो हुन मद्दत गर्दछन्। SNOB भएकोले केहि पनि सहयोग गर्दैन। यसले 'सामाजिक नेटवर्क' लाई कुनै मान राख्दैन।
ठिक छ ... मेरो रेन्ट पर्याप्त छ। एक SNOB के हो? अर्को पटक कोही सामाजिक नेटवर्क साइटमा कसैको मतलब, अनादर, वा साधारण बेवास्ताको मतलब हो, तपाईं तिनीहरूलाई सहीमा ग्राफिक पठाउन सक्नुहुनेछ! यी ग्राफिकहरू कुनै पनि प्रयोग गर्न स्वतन्त्र महसूस गर्नुहोस् जहाँ भए पनि र तपाईं चाहानुहुन्छ! यहाँ पठाउनुहोस् यदि तिनीहरूलाई पूर्ण विवरण चाहिन्छ भने।
र यदि तपाईं SNOB हुनुहुन्छ भने, अगाडि बढ्नुहोस्। यसमा मलाई फ्लेमिंग गर्न कष्ट नदिनुहोस् - म यसलाई मेटाउनेछु।
टैग: snobपारखीसामाजिक संजाल
सीमानाहरू पुरस्कार मठ
पृष्ठ दृश्य मर्न छैन
डिसे 1, 2006 मा 6: 44 AM
डग, माफ गर्नुहोस् तपाईंले एजेक्स प्लेनेटमा ती शरारती मान्छेहरूको बारेमा हामीलाई बताउनको लागि तपाईंको कार्पल टनेल इन्फ्लेम गर्नुपर्‍यो। म अनुमान गर्छु कि हरेक भीडमा हेक्लरहरू छन्। उनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँ त्यो गर्नुहुन्छ। र तपाईं के गरिरहनु भएको छ। तपाईं र मलाई प्रेरणा हुनुहुन्छ!
डिसेम्बर १, २०१ 1 2006:२:2 अपराह्न
यो मलाई लाग्छ, त्यहाँ धेरै वाननाब बुलीहरू छन् र तिनीहरू सोच्छन् कि उनीहरूले दु: ख दिन सक्छन् र उत्तेजित गर्न सक्छन् *** किनकि तिनीहरू इन्टरनेटमा "बेनामी" हुन्। केहि मानिसहरु गधा *** को हुनबाट मात्र बन्द हुन्छन्। मैले हेर्ने तरिका यो हो कि तिनीहरू दयनीय, ​​एक्लो प्राणीहरू छन् र कुनै प्रतिक्रिया वा चिन्ताको लायक छैन।
मानिस तपाई एक विम्प हुनुहुन्छ
डिसेम्बर १, २०१ 1 2006:२:6 अपराह्न
म मद्दत गर्न सक्दिन तर तपाईंको प्रतिक्रिया मा chuckle। समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद।
समर्थनको लागि प्याट र CJ लाई धन्यबाद!
डिसेम्बर १, २०१52006:२:7 अपराह्न
धन्यबाद, कार्ल! तपाइँको सिफारिसको आधारमा पृष्ठको फुटरमा CC लाइसेन्स थपियो।
म सोचिरहेको थिएँ कि जब कसैले यस बढ्दो चलनमा जान्छु। म तपाईंको ब्याज bण लिने छु र अरुलाई पठाउँदैछु। त्यसैले CC लाईसेन्स गर्न नबिर्सनुहोस् यसलाई 😉
डग हामी सबै तपाईंलाई माया गर्छौं, के हामीले केहि गधालाई कोर्रा गर्न आवश्यक छ, यदि हामीलाई थाहा दिनुहोस् भने, म केटाहरूलाई पनी खोजी गर्न सक्दछु कि अझै गर्न सक्छन्। म सक्दछु तर लामो समयको लागि होइन